इन्स्टाग्राममा फन्ट कसरी परिवर्तन गर्ने: यसलाई परिवर्तन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू | अनलाइन क्रिएटिभहरू
इन्स्टाग्राम किशोर र वयस्क जनता दुबै द्वारा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो। हामीलाई थाहा छ कि छविको साथमा पाठको साथ कसरी छवि प्रकाशित गर्ने, हामी सधैं के गर्दैछौं भनेर देखाउने कथा पनि अपलोड गर्न सक्छौं। तर के हामी वास्तवमै फन्ट कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर जान्दछौं?
यस ट्यूटोरियलमा हामी यो उपकरण के हो भनेर संक्षिप्त रूपमा व्याख्या गर्छौं, यदि तपाईंले अहिलेसम्म यसको संसारमा प्रवेश गर्नुभएको छैन भने, र पनि हामी तपाईंलाई सरल चरणहरू सहितको ट्यूटोरियल पनि देखाउँछौं जहाँ तपाईं आफ्नो मनपर्ने फन्ट परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ र यस तरिकाले, धेरै धेरै निजीकृत गर्न सक्षम हुन यो उपकरण धेरै फेसनल भएको छ।
1.1 यो के हो?
2.3 तपाईं कहाँ फन्ट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ
3 फन्ट परिवर्तन गर्न अनुप्रयोगहरू
3.2 फन्ट बोर्ड
स्रोत: तपाईंको विशेषज्ञ
इन्स्टाग्रामलाई सामाजिक सञ्जाल र एप्लिकेसनको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसको उद्देश्य छ छवि र भिडियो दुवै प्रकाशित गर्न सक्षम हुनु जहाँ तपाईं फिल्टर, रंग, आदि जस्ता अनन्त फोटोग्राफिक प्रभावहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ। छविहरू र भिडियोहरू प्लेटफर्म र अन्य सामाजिक सञ्जालहरूमा साझेदारी गर्न सकिन्छ।
यो एप्लिकेसन आज सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल भएको छ, किनकि यो युवा, किशोरकिशोरी र वयस्कहरूबाट धेरै विविध श्रोताहरूमा पुगेको छ।
यस सामाजिक सञ्जालसँग 1000 लाख प्रयोगकर्ताहरू यो तस्बिर र भिडियोहरू साझेदारी गर्न, फिल्टरहरू लागू गर्न र यसरी व्यावसायिक छवि बन्न मोबाइलबाट खिचिएको फोटो प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यस अनुप्रयोगको विशेषता के हो भने यो अनलाइन वाणिज्यको लागि पनि डिजाइन गरिएको हो, र यो हाल बाह्य वेब पृष्ठहरूमा पहुँच भएकोले यो एक प्रकारको विश्वव्यापी बजार बनिरहेको छ।
र त्यति मात्र होइन, फोटोग्राफीका साथै खाना पकाउन आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्, तपाईं यसरी आफ्नो सार्वजनिक व्यावसायिक प्रोफाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई वृद्धिको बारेमा बताउँछ तपाईंको व्यवसायको र प्रकाशनलाई उच्च संख्यामा भ्रमणहरू पुग्न अनुमति दिनुहोस्।
छोटकरीमा, यदि तपाइँ बढ्नु आवश्यक छ र तपाइँलाई थाहा छैन कसरी, यो अनुप्रयोगले तपाइँलाई बिभिन्न विकल्पहरू प्रदान गर्दछ ताकि तपाइँ दिन प्रति दिन आफ्नो काम सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सामाजिक सञ्जालहरूमा जस्तै, तपाईंले तपाईंलाई पछ्याउन इच्छुक व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ।
ह्यासट्यागहरूद्वारा फिल्टर बनाउनुहोस् र तपाईंलाई चाखलाग्दो लाग्ने खाताहरू पालना गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई याद गरून्, तिनीहरूका प्रकाशनहरूमा "लाइक" दिनुहोस् वा टिप्पणी गर्नुहोस्। यो धेरै सम्भव छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई पछ्याउनेछन्।
यो महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाईंले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न एक व्यावसायिक खाता सिर्जना गर्नुभएको छ भने, तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँको समाचारहरूमा ध्यान दिनुहोस् प्रकाशनहरू, रिलहरू, कथाहरू, छविहरू वा भिडियोहरू तपाईंको प्लेटफर्ममा वा अन्य प्रयोगकर्ताहरूको काम पनि साझा गर्नुहोस्।
हामीलाई ह्यासट्यागको रूपमा थाहा भएको कुरा प्रयोग गर्नुहोस्, यसले Instagram समुदायलाई तपाईंको प्रकाशन हेर्न र गर्न अनुमति दिन्छ आफ्नो काम राम्रो पहिचान।
अन्य प्रयोगकर्ताहरूबाट प्रेरित हुनुहोस् र आफ्नो कामको साथ राम्रो फलो-अप राख्नुहोस्। साथै आफ्नो एल्गोरिदम सक्रिय राख्नुहोस्, यसले इन्स्टाग्रामलाई अनुमति दिन्छ तपाईंलाई सल्लाह दिने क्षमता प्रदान गर्दछ र तपाइँलाई तपाइँको सम्बन्धित कामहरू देखाउनुहोस्।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, आफ्नो प्रयोगकर्ताहरु संग अन्तरक्रिया र तपाईंले फलो गर्ने मानिसहरूसँग, तिनीहरूको पोष्टहरूमा टिप्पणी गर्नुहोस्, र यो पारस्परिक हुनेछ।
हामीले सुरु गर्नु पर्ने पहिलो कुरा हो फन्ट जनरेटर खोज्नुहोस्। त्यहाँ धेरै साइटहरू छन् जुन तपाईंले भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तिनीहरूसँग स्रोतहरूको विस्तृत श्रृंखला छ। तपाईंले फेला पार्न सक्ने केही जेनरेटरहरू यी हुन्:
पत्र र फन्टहरू
सत्य हो, तिनीहरू सबैसँग समान प्रकार्य छ, तर मेटा ट्यागहरू स्रोतको पूर्वावलोकन गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरिकाले तपाइँ सुरुबाट जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाइँ एक निश्चित टाइपफेस कस्तो देखिन्छ भन्ने मनपर्छ। अब ट्यूटोरियल जारी राखौं।
तपाईंले परिवर्तन गर्न चाहनुभएको पाठमा टाइप गर्नुहोस् र उपकरणहरूले तपाईंलाई उपलब्ध फन्टहरूको सूची देखाउनेछ। तपाइँ तपाइँलाई सबैभन्दा मनपर्ने वा तपाइँको ब्रान्ड को व्यक्तित्व संग जान्छ कि एक छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले रोज्नुभएपछि, "प्रतिलिपि" विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
आफ्नो इन्स्टाग्राम खातामा जानुहोस् र "प्रोफाइल सम्पादन गर्नुहोस्" विकल्प प्रविष्ट गर्नुहोस्।
"नाम" खण्डमा फन्ट टाँस्नुहोस् र "ठीक छ/पठाउनुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
आफ्नो प्रोफाइलमा फर्कनुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि तपाईंले छनौट गर्नुभएको फन्टले तपाईंले अपेक्षा गरेको सुविधाहरू कायम राख्छ। यसको विपरीत, तपाईं अन्य विकल्पहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सामग्रीलाई फरक बनाउन र तपाईंको ब्रान्डको सारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न, तपाईंको फाइदाको लागि Instagram को फन्ट स्विचिंग प्रयोग गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि इन्स्टाग्राममा तपाइँको प्रोफाइलको विवरण तपाइँको परिचय पत्र हो, त्यो हो, जसले यसलाई भ्रमण गर्दछ एक सामान्य विचार प्राप्त गर्नेछ जसले पछि तपाइँको सबै प्रकाशनहरूको समीक्षा गर्न नेतृत्व गर्नेछ।
तपाईं कहाँ फन्ट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ
प्रोफाइल बायोमा नाम परिवर्तन गर्ने ब्रान्ड वा खाताहरू छन्। अरूले विवरणमा विभिन्न फन्टहरू समावेश गर्दछ। ह्यासट्यागहरूमा अक्षरहरू परिवर्तन नगर्नुहोस् र सधैं पढ्न सकिने फन्टहरू छनौट गर्नुहोस्।
टिप्पणीको जवाफ दिंदा तपाईले विभिन्न अक्षरहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाइँ प्रश्नहरू, ट्रिभिया वा खेलहरू सोध्नुहुन्छ किनकि तपाइँ प्रत्येक प्रयोगकर्ताको लागि फरक अक्षरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ।
कथाहरूमा तपाईं विभिन्न डिजाइनहरू मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ र डिजाइन कार्यक्रमहरू प्रयोग नगरीकन धेरै आकर्षक कथाहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्यक्ष सन्देशहरूमा यस तरिकाले तपाइँ इन्स्टाग्राममा गीतहरू पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाइँका अनुयायीहरूसँग व्यक्तिगत सन्देशहरू साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ।
फन्ट परिवर्तन गर्न अनुप्रयोगहरू
हुनसक्छ एन्ड्रोइडमा फन्ट परिवर्तन गर्न सबैभन्दा प्रसिद्ध अनुप्रयोग iFont हो। गुगल प्ले मार्फत 10 मिलियन भन्दा बढी स्थापनाहरू संग, यो को श्रेणी मा एक सन्दर्भ हो एन्ड्रोइडका लागि अनुकूलन अनुप्रयोगहरू, र यो वास्तवमै एक हो जसले आफ्नो मिशन पूरा गर्दछ।
तपाईंले एप स्थापना गर्ने बित्तिकै, सबै प्रकारका स्रोतहरूको ठूलो सूची स्क्रिनमा देखा पर्नेछ। प्रत्येक फन्टले यसको छेउमा डाउनलोड प्याकेजको साइज समावेश गर्दछ, र यो उद्देश्यको लागि भाषालाई पनि संकेत गर्दछ। थप रूपमा, मुख्य स्क्रिनमा हामीले धेरै ट्याबहरू फेला पार्नेछौं: सिफारिस गरिएको, खोज र मेरा स्रोतहरू।
यदि तपाईं iFont द्वारा प्रस्तावित फन्टहरू मध्ये एक प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ ती मध्ये एक मा क्लिक गर्नुहोस्, र तलको "डाउनलोड" बटन मार्फत, फन्ट समावेश भएको प्याकेजको डाउनलोड सुरु गर्नुहोस्। अन्तमा, केवल "लागू गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्। प्रयोग भइरहेको यन्त्रमा निर्भर गर्दै, फन्ट सीधै लागू गर्न सकिन्छ, वा यो अनुप्रयोगको रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ, जुन त्यसपछि प्रणाली सेटिङहरूमा फन्ट सेटिङहरू मार्फत चयन गरिनुपर्छ।
तपाईंले आफ्नो एन्ड्रोइडमा अक्षर फन्टहरू स्थापना नगरे पनि, फन्टबोर्ड एपले तपाईंलाई किबोर्ड मार्फत फन्ट परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ। छोटकरीमा, फन्टबोर्ड एउटा किबोर्ड हो जसमा समावेश हुन्छ ५०+ नि:शुल्क फन्टहरू जुन तपाईले व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, आदिमा लेख्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले पहिलो पटक एप स्थापना र खोल्नुभएपछि, तपाईंले यसलाई आफ्नो फोनको किबोर्ड बन्न अनुमति दिन आवश्यक छ। त्यहाँबाट, जब तपाइँ एपमा किबोर्ड तल ताननुहुन्छ, फन्टबोर्ड देखा पर्नेछ। किबोर्डको माथि तपाईले लेख्न सक्ने विभिन्न फन्टहरू छन्। तपाईलाई मनपर्ने एउटा चयन गर्न पट्टी तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
तपाईं यसलाई जाँच गर्न सक्नुहुन्छ केही फन्टहरू अवरुद्ध छन्, र यो हो कि FontBoard सँग सशुल्क संस्करण छ जसमा तपाईले यसको अक्षर फन्टहरूको पूर्ण क्याटलग पहुँच गर्न सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो अनुप्रयोगमा जस्तै, फन्टहरू तपाईंको एन्ड्रोइड मोबाइलको लागि फन्टहरू र इमोजीहरूको किबोर्ड हो। यद्यपि, त्यहाँ स्पष्ट भिन्नता छ: फन्टहरूमा धेरै विज्ञापनहरू छैनन् र तिनीहरूका सबै फन्टहरू निःशुल्क छन्। एप डाउनलोड र स्थापना गरेपछि, यसलाई आफ्नो फोन किबोर्डको रूपमा सेट गर्न खोल्नुहोस् र यसलाई सफलतापूर्वक काम गर्न आवश्यक अनुमतिहरू दिनुहोस्।
त्यसपछि, तपाईंले कुनै पनि अनुप्रयोगमा किबोर्ड खोल्नु पर्छ, तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने फन्ट छनौट गर्न शीर्ष पट्टी मार्फत स्क्रोल गर्नुहोस् र टाइप गर्न सुरु गर्नुहोस्।
WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat र अन्य धेरै अनुप्रयोगहरूसँग काम गर्ने फन्ट किबोर्ड प्रयोग गर्न यो कति सजिलो छ।
iFont को अर्को प्रसिद्ध विकल्प HiFont हो, एक नि: शुल्क अनुप्रयोग जसले, अघिल्लो जस्तै, तपाईंलाई एन्ड्रोइड मोबाइलहरूको फन्ट परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ, प्रस्ताव गर्दछ। फन्टहरूको ठूलो सूची जुन तपाईंले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, ठूलो बहुमत पूर्ण रूपमा नि: शुल्क।
iFont को विपरित, HiFont फन्टहरू स्ट्यान्ड-अलोन अनुप्रयोगहरूको रूपमा Google Play मार्फत डाउनलोड र स्थापना हुनुपर्छ। त्यसो गर्नाले एपले नै तपाईंको यन्त्रले फन्ट परिवर्तन गर्न समर्थन गर्छ कि गर्दैन भनी जाँच गर्न सक्छ, र यदि त्यसो हो भने, तपाईंले भर्खरै डाउनलोड गर्नुभएको फन्ट छनोट गर्न ठूलो "लागू गर्नुहोस्" बटन देखा पर्नेछ।
यो एप, यद्यपि यो IFont जस्तै कार्यात्मक छ, तर अघिल्लो विकल्पले काम नगरेको अवस्थामा मात्र फर्कने विकल्प हुनुपर्छ, किनभने यो एप यसमा केही महत्त्वपूर्ण कमजोरीहरू छन्। उदाहरणका लागि, तपाइँको आफ्नै शैलीहरू आयात गर्न सम्भव छैन, र एप पनि विज्ञापनको साथ ग्रस्त छ जुन कहिलेकाहीँ धेरै हस्तक्षेपकारी हुन्छ।
अघिल्लो विश्लेषण र छोटो ट्यूटोरियल पछि, यो ध्यान दिनुपर्छ कि इन्स्टाग्राम समग्र रूपमा एक धेरै उपयोगी उपकरण हो, न केवल अन्तरक्रियाको लागि तर डिजाइनको लागि पनि। तपाईंले थप अनुसन्धान सुरु गर्ने र हामीले सुझाव दिएका यसका विभिन्न चालहरू र अनुप्रयोगहरू प्रयास गर्ने समय आएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » इन्स्टाग्राममा फन्ट कसरी परिवर्तन गर्ने
मार्केटिङ मा ग्राफिक डिजाइन को महत्व
ग्राफिक डिजाइनका लागि सामग्री